Top 5 Cryptocurrency Brokas Eprel 2021 - Achọghị Pros & Cons!
Top 5 Cryptocurrency Brokas - Kedu Broker kacha mma? 2021
Ma ị bụ onye ọhụụ ọhụụ na-achọ itinye ego na dijitalụ
ego maka oge mbụ, ma ọ bụ ọkachamara nwere oge n'ịchụ nta maka ikpo okwu asọmpi, ndị na-ere ahịa cryptocurrency dị na narị otu narị. Ọ bụ ezie na nke a na-enye gị ohere ịhọrọ onye na-ere ahịa nke kachasị egbo mkpa gị, ịmara ebe ikpo okwu ịdebanye aha ya adịghị mfe.
N'isiokwu a, anyị na-atụle ndị na-ere ahịa cryptocurrency kacha mma ugbu a na ahịa UK. Anyị na-enyocha ọtụtụ ihe ị chọrọ ile anya maka mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa ọhụụ - dịka iwu, ụgwọ, gbasaa, nkwado ndị ahịa, na usoro ịkwụ ụgwọ.
Mara: Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency ka na-arụ ọrụ nke ọma na-achịkwaghị na UK. Site na nke ahụ, ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ego na cryptocurrencies site na ngwaahịa CFD, ndị na-ere ahịa na-ejikarị ikikere na FCA ma ọ bụ CySEC.
Gịnị bụ Cryptocurrency Broker?
Na nkenke, onye na-ere ahịa cryptocurrency bụ ikpo okwu ntanetị na-enye gị ohere ịzụta ma ree ego dijitalụ ama ama dị ka Bitcoin, Ethereum, na Ripple. Usoro a na arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka onye na-azụ ahịa ọdịnala, ebe ọ bụ na ị ga-emepe akaụntụ, debe ego, wee kpebie nke ịchọrọ iji tinye ego. ga ikwado zuo n'ihi gị.
Site na nke a, e nwere ụdị ọnụọgụ abụọ nke ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ntanetị, na nke ị họọrọ ga-adabere na ihe ị chọrọ. Nke a mejupụtara onye na-echekwa ego na-enye gị ohere ịzụta ego dijitalụ n'ụdị ha kachasị mkpa, nke pụtara na ị ga-echekwa mkpụrụ ego gị na obere akpa nzuzo.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị ahịa na-ahọrọ iji ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwado ngwaahịa CFD. Nke a na - enye gị ohere itinye ego na cryptocurrencies n’enweghi akụ na - akpata, nke pụtara na ị chọghị ichegbu onwe gị maka nchekwa. Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa CFD na-enye gị ohere ịme mkpuchi oge dị mkpirikpi, yabụ ị nwere ike ịkọ na uru nke akụ ga-agbada.
N’otu ụdị dị ka ndị na-ere ahịa ọdịnala, ị ga-akwụ ụgwọ ego iji tinye ego na cryptocurrencies. Nke a na-abata n'ụdị ọrụ, nke a na-agbakọ megide uru nke itinye ego gị. Ikwesiri ịkwụ ụgwọ a na njedebe abụọ nke azụmaahịa gị. Y’oburu na iji onye ahia ego CFD, mgbe ahu i gha enwe ike ahia na ihe ngbanye oru. Otú ọ dị, ị ga-akwụ ụgwọ ego n'ụdị mgbasa.
Uru na ọghọm nke Brokas Cryptocurrency
Na-enye gị ohere ịnweta ọnọdụ ọtụtụ ijeri paụnd cryptocurrency
Ọtụtụ na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị
Ike mkpụmkpụ cryptocurrencies site na CFDs
Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency na-arụ ọrụ na 24/7 ndabere
Na-eduga nyiwe-enye gị ohere iji nyochaa njirimara gị na nkeji
Ulo oru ugwo na-abawanye
FCfọdụ ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-achịkwa FCA
Cryptocurrencies bu oke aku di egwu
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa abanyela n'afọ ndị na-adịbeghị anya
Fọdụ ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ n'ụzọ anaghị achịkwa
Ofdị Ndị Ahịa Cryptocurrency
E nwere ụdị abụọ nke ndị na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na oghere UK - ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere ịnweta cryptocurrencies 100% chara acha, yana ndị na-ere ahịa na-eme ka itinye ego cryptocurrency site na CFDs.
N'okpuru anyị na-akọwa otú ọnye ahịa abụọ a si dị iche.
🥇 Nwepụta Cryptocurrencies kpam kpam
Y’oburu n’icho itinye ego na ahia nke oma dika Bitcoin, ma ichoro inwe ihe omuma 100% kpam kpam, yabụ na igha eji onye ahia ahia ahia cryptocurrency. Echiche kachasị elu bụ na ị ga-eji aka gị nweta mkpụrụ ego ahụ wee si otú a - ị ga-echekwa ha na obere akpa nzuzo. Nke a na-abịa yana ma ya uru ma ọghọm.
N'otu aka, site na ịchekwa mkpụrụ ego na obere akpa ha, ha ga-anọgide na-adị n'aka gị n'agbanyeghị agbanyeghị. Ka o siri dị, ị gaghị enwe ike ịdaba na onye na-ere ahịa. N'aka nke ọzọ, ịchekwa mkpụrụ ego n'onwe gị na-eweta nsogbu ya. Nke a bụ n'ihi na ndị ọjọọ na-eme ihe ike nwere ikike ịmebanye obere akpa onwe ha site na mgbe onye ọrụ ha wụnye ihe nchebe.
N’ụzọ dị oke mkpa, ụzọ kachasị mma iji chekwaa mkpụrụ ego gị bụ idobe ha na obere ngwaike ngwaike, ọ bụghị opekata mpe n’ihi na anaghị ejikọ ya na ịntanetị. Nke a na - eme ka usoro ị na - ebufe mkpụrụ ego ghara ịgwụ ike, ọ bụ ezie na nke a bụ azụmaahịa ịkwesịrị ịme mgbe ị nwere cryptocurrencies kpamkpam.
🥇 itinye ego na Cryptocurrency CFD Broker
Nhọrọ nke abụọ ị nwere bụ iji onye na-ere ahịa CFD cryptocurrency. Dị ka ọ dị na ngwaahịa CFD ndị ọzọ dịka ebuka, ndeksi, na ngwa ahịa, ị gaghị enweta akụ na ụba cryptocurrency. Kama nke ahụ, ị ​​na-ekwu naanị otu ụzọ ahịa ga-esi aga.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịdị nke Bitcoin ma chee na ọ bụ n'ihi ịbawanye uru na ụbọchị ma ọ bụ izu ndị na-abịanụ, CFDs bụ ụzọ dị mma iji kwado nke a. N’ụzọ dị mkpa, CFDs na-enye gị ohere itinye ego na Bitcoin ọnụ ala na ngwa ngwa. Ọzọkwa, CFDs na-enye gị nhọrọ nke itinye ihe nkwado, yana itinye aka n'ahịa dị mkpụmkpụ.
Banyere nke mbụ, nke a pụtara na ị nwere ike itinye ego karịa karịa na akaụntụ gị. Na nke ikpeazụ - nke a bụ ebe ị na-eche maka uru nke cryptocurrency na-aga ala. Uru ọzọ dị n'iji onye na-ere ahịa CFD cryptocurrency bụ na UK's FCA ma ọ bụ CySEC na-achịkwa nyiwe na Saịprọs.
Kedu ụzọ ịkwụ ụgwọ na-akwado nkwado Brokas Cryptocurrency?
N'oge na-adịbeghị anya, iji ego nke ụwa zụta cryptocurrencies bụ ọrụ siri ike, ọbụnadị n'ihi na ndị na-agbanwe agbanwe enweghị ike inweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ chọrọ n'aka ndị na-akwụ ụgwọ. Nke a pụtara na ị ga - ebufe ego nye onye na - ere ahịa na - anaghị achịkwa - ọtụtụ n'ime ha abụghị naanị aghụghọ.
Agbanyeghị, site na ụlọ ọrụ cryptocurrency ugbu a ọ bụ ọtụtụ ijeri paụnd ahịa, enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị. Nke a gụnyere ọkacha mmasị nke:
Transfer Nyefee ego mpaghara
Wire International Waya
Ka anyị na-atụle na ngalaba na-esote, ndị na-ere ahịa cryptocurrencies ga-akwụ gị ụgwọ mgbe ụfọdụ mgbe ha na-etinye ma na-ewepu ego. Ọzọkwa, ọ ga-abụ na ị ga-achọ ị nweta ego nkwụnye ego pere mpe.
Ego Mgbanwe nke Cryptocurrency
Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency nọ na azụmaahịa ịme ego, yabụ enwere ụgwọ dị iche iche nke ịkwesịrị ịmara tupu itinye ego. Ego a kapịrị ọnụ ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, yabụ kpachara anya ịlele nke a n'onwe gị.
Ma ị ga-akwụ ụgwọ ọ bụla na nkwụnye ego ọ ga-akwụ ụgwọ ga-adabere na ihe abụọ - onye na-ere ahịa na ụdị usoro ịkwụ ụgwọ ịchọrọ iji.
Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na anyị na-akwado na ibe a na-enye gị ohere itinye ego n'efu, ọ bụ ezie na ha na-akwụkarị ụgwọ nkwụsịtụ pere mpe.
Ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ga-eme nke a na ntọala pasent. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa mkpuchi ebubo 4% iji tinye ego na kaadị debit, ịchọrọ ịdebe £ 1,000, ị ga-akwụ ụgwọ ego nke £ 40.
Fọdụ ndị na-ere ahịa cryptocurrency ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ azụmaahịa mgbe ị na-etinye ego. Ọ bụrụ na ha emee, a ga-akwụ ụgwọ nke a na nsọtụ abụọ nke azụmaahịa ahụ. Ọzọkwa, a na-agbakọ nke a dị ka pasent megide ego ị tinyere.
Ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa na-ebo ebubo ọrụ azụmaahịa 1%
Want chọrọ ịzụta worth 500 uru nke Bitcoin
A ga-ebo gị ebubo ọrụ nke £ 5 (1% nke £ 500)
Chọrọ ire Bitcoin gị mgbe ọ ruru £ 750
A ga-ebo gị ebubo ọrụ nke £ 7.50 (1% nke £ 750)
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ mgbe ịbido tinye ego na cryptocurrency, yana mgbe ị kpebiri ire.
Mgbasa ahụ dị mkpa naanị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji onye na-ere ahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ na CFDs. Maka ndị na-amaghị, mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire, yabụ ọ bụ ụgwọ ị na-akwụ n'ụzọ na-enweghị isi.
Use na-eji cryptocurrency CFD ore itinye ego na Bitcoin
Ọnụ 'Buy' nke Bitcoin bụ $ 10,000
Ọnụ 'ere' nke Bitcoin bụ $ 10,100
Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ ruru 1%
Nke a pụtara na ịkwesịrị ịme opekata mpe 1% na uru iji mebie
N'ikpeazụ, ị ga-achọ iji onye na-ere ahịa nke na-agbasa mgbasa ozi siri ike, n'ihi na nke a ga - enyere aka ịkwụsị ọnụahịa azụmaahịa gị pere mpe.
Mara: Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa CFD cryptocurrency na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ntọala enweghị ọrụ. Ka o siri dị, nanị ego ị ga-akwụ bụ gbasara ịgbasa.
Ego Dijitalụ akwadoro na Brokas Cryptocurrency
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-etinye ego oge mbụ na-achọ zụta Bitcoin, e nwere ugbu a ọtụtụ puku ndị ọzọ cryptocurrencies na-arụ ọrụ n'ahịa. A na - akpọkarị 'alt-coins', ndị a na-agbanwe agbanwe karịa Bitcoin, ha na-ata ahụhụ dị ala karịa.
Alt-mkpụrụ ego na-abịakwa nwee ihe ize ndụ karịa Bitcoin. N’akụkụ tụgharịa, mkpụrụ ego alt nwere ikike dị elu karịa. Ka o sina dị, ọ bụ ezie na edepụta ego ọ bụla dijitalụ nke ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwado karịrị akarị nke isiokwu a, n’okpuru ị ga-ahụ mkpụrụ ego ndị a na-azụkarị na oghere.
El Kpakpando Lumens
🥇 Mkpụrụ ego Binance
Na-ere obere Cryptocurrencies
Short-ere na-ezo aka usoro nke ịkọ nkọ na ihe onwunwe ga-agbada na uru. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị chere na Bitcoin ugbu a akarịala etu a - yabụ ọnụahịa ya ga-agbada n’izu ndị na - abịanụ, ị ga-erenwu ngwa ahịa ahụ.
Nanị ụzọ ị ga - esi mee nke a bụ iji onye na - echekwa ego na - ahụ maka ọrụ CFDs. Usoro a na arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka ịme ahịa azụmaahịa ọkọlọtọ, mana ntụgharị ihu. Yabụ, ị ga-ibido mkpa ịtọ a na-ere iji, na mgbe ahụ a Buy iji mgbe ị na-ekpebi wepu exit gị ahia.
Lelee ihe atụ dị n'okpuru ebe otu ntinye azụmaahịa dị mkpụmkpụ ga-arụ ọrụ na onye na-ere ahịa cryptocurrency.
Not bụghị onye ofufe nke Bitcoin, yabụ ị kpebiri iji onye na-ere ahịa CFD ka ọ ghara ire ngwa ngwa
Ego Bitcoin dị ugbu a na £ 5,000 kwa mkpụrụ ego
Na-etinye iwu 'ere' na mkpokọta £ 1,000
Fewbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, Bitcoin malitere ịmalite na ahịa ma ọ bara uru £ 4,000 kwa mkpụrụ ego
Nke a na-anọchite anya mbelata uru 20%
I kpebiri igbachi uru gị, yabụ na ị ga-etinye iwu 'zụrụ' iji pụọ na azụmaahịa ahụ
Made nwetara ngụkọta nke £ 200 na uru, dabere na 20% nke £ 1,000 osisi gị
Nweta ego na Cryptocurrency Brokas
You nwere nnagide dị elu maka ihe egwu ma chọọ itinye ihe nkwụnye ego na azụmaahịa gị cryptocurrency? Ọ bụrụ otu a, ị nwere ihu ọma, ebe enwere ugbua ọtụtụ ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ na oghere ịntanetị nke na-enye gị ohere itinye ntinye ego. Ọzọkwa, ị ga-eji onye na-ere ahịa CFD maka nke a.
Ọ bụrụ na ị nọ na UK, ị ike ga-ejikwa iwu ndị European Security and Markets Authority (ESMA) nyere iwu. Ọ bụrụ na ị dị, nke a pụtara na ị ga-etinye aka na ntinye nke 2: 1 mgbe ị na-ere cryptocurrencies. Oke a di n’ichebe ndi n’etu ego n’enweghi aka site na nnukwu ihe nfu.
Na ntinye nke 2: 1, ị nwere ike ịzụ ahịa okpukpu abụọ nke ị nwere na akaụntụ gị
Yabụ, itule nke £ 500 ga-enye gị ohere ịzụta ma ọ bụ ree £ 1,000 uru nke cryptocurrencies
Ọ bụrụ na ahia gị gbadata karịa 50% (1/2), ahia gị ga-agba mmiri
Nke a pụtara na ị ga-atụfu oke £ 500 gị dum
Ọ bụrụ nhapu ego nke 2: 1 ezughi ezu maka mkpa ahia gị, ị ga-echebara onye na-ere ahịa mgbapụta dị ka Crypto Rocket. Ndị dị otú a na-arụ ọrụ na usoro a na-achịkwaghị achịkwa, yabụ ịkwesịrị ịkpachara anya. Y’oburu n’itinye, i gha ahia ahia cryptocurrencies nke ruru 500: 1, nke bu nnukwu.
Na leverage nke 500: 1, ị nwere ike itinye ego 500 karịa ka ị nwere na akaụntụ azụmaahịa cryptocurrency gị
Yabụ, itule nke £ 500 ga-enye gị ohere ịzụta ma ọ bụ ree £ 250,000 uru nke cryptocurrencies
Nke a ga - eme ka uru gị bawanye uru site na 500x
Agbanyeghị, ọ bụrụ na azụmaahịa gị gbadara karịa 0.2% (1/500), azụmaahịa gị ga-agba mmiri.
Mara: Leverage bụ ngwa ahịa azụmaahịa dị oke egwu ekwesiri izere ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ọhụụ. Nke a bụ ikpe kachasị na ụlọ ọrụ mkpuchi nke ọ maara nke nnukwu volatility.
Ndị Brokas Cryptocurrency Nwere Nchekwa?
O nwere ike ịbụ na ị nụtụla akụkọ ụjọ nke ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-enweta ego, ebe ndị ahịa na-atụfu nguzo ha niile. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na mbụ ekpuchiri mfu ndị a, ọtụtụ emebeghị. Ihe na-echegbu onwe ya bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ anaghị achịkwa.
Ka o siri dị, ị nweghị ebe ị ga-atụgharị ma ọ bụrụ na ihe agahie. Ozi ọma ahụ bụ na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-ejide ikikere na UK FCA ma ọ bụ CySEC na Saịprọs. Ndị ọzọ jikwa ikikere ASIC n'Australia, nke pụtara na ị ga-enwe usoro nlekọta n'ọtụtụ ihu.
Site na nke a, anyị ga-atụ aro ịme echiche ndị a mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa ọhụụ cryptocurrency iji hụ na ego gị ga-adị mma.
??? Nchekwa Nzuzo: Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa ọdịnala nke ọdịnala nke na-enye gị ohere ịzụta ma nwee mkpụrụ ego dijitalụ kpamkpam, mgbe ahụ ị kwesịrị ịlele ma ikpo okwu ahụ na-eji nchekwa nchekwa. Nke a bụ ebe a na-echekwa ego na-anọghị n'ịntanetị, yabụ ohere nke mbanye anataghị ikike mpụga fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
🥇 Nyocha abuo: Nyocha abuo abuo (2FA) na-enye nchebe ozo na nchekwa ulo ahia gi. Na nkenke, a ga-achọ ka ị tinye koodu pụrụ iche nke ezitere na ekwentị gị oge ọ bụla ị na-arụ ọrụ akaụntụ akaụntụ. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a gụnyere ịbanye na iwepụ ego.
🥇 Multi-Sig Wallets: Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa cryptocurrency jiri ọtụtụ wallets, nke a pụtara na achọrọ otutu ntinye aka maka ikpo okwu iji hazie iwepụ. Ọzọkwa, nke a na-arụ ọrụ dị ka ihe nchebe dị ukwuu megide ndị na-agba ọsọ nke atọ
Data Data ezoro ezo: Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye ego na ọdịnala debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, mgbe ahụ ịkwesịrị iji hụ na weebụsaịtị nke onye na-ere ahịa na encrypts data. Nke a ga - egbochi nkọwapụta kaadị gị ịbanye n’aka na - ezighi ezi.
Otu esi eji Cryptocurrency Exchange: Nzọụkwụ Nzọụkwụ Ntuziaka
Yabụ ugbu a ị matara ihe niile banyere etu ndị na-agbanwe ego cryptocurrency si arụ ọrụ, anyị ga-atụle usoro itinye ego na njedebe. Site na ịgbaso ụkpụrụ nduzi usoro akọwapụtara n'okpuru, ị ga-enwe ike itinye ego na onye na-ere ahịa cryptocurrency n'ime nkeji.
Kwụpụ 1: Họrọ Cryptocurrency Broker
Portzọ mbata gị nke mbụ ga-abụ ịhọrọ onye na-ere ahịa cryptocurrency na-egbo mkpa gị kacha mma. Needkwesịrị ịtụle ihe ndị bụ isi dị ka ma ịchọrọ ịzụta cryptocurrencies ma ọ bụ itinye ego na CFDs, yana ụgwọ, ụzọ ịkwụ ụgwọ, nkwado ndị ahịa, na mgbasa.
Anyị ga-atụ aro ka ị nyochaa ngalaba dị n'okpuru ebe a otu esi ahoputa onye ahia ahia cryptocurrency ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-erere onwe gị cryptocurrency, gịnị ma ị tụlee uru nke otu n'ime nyiwe pre-vetted edepụtara na ibe a?
N'agbanyeghị ma ị na-eji onye na-ere ahịa ọdịnala ma ọ bụ usoro CFD, ị ga-emepe akaụntụ. Ole ozi anakọtara site na gị ga-adabere na ụdị nke cryptocurrency ore na ị na-ahọrọ.
Na nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ego na ezigbo ụwa, mgbe ahụ nke a nwere ike ịgụnye ihe ndị a:
Aha mbụ na nke ikpeazụ
Kwụpụ 3: Nyochaa njirimara gị
Ga-ugbu a mkpa iji nyochaa njirimara gị. Nke a bụ iji hụ na onye na-ere ahịa na-ekwenye na onye nyere ya ikikere, yana iwu ụlọ na mgbochi mgbochi ego.
Usoro a chọrọ ka ị bulite akwụkwọ doro anya nke NJ gị nyere gị (paspọtụ ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala) yana ihe akaebe nke adreesị. Nke a kwesịrị ịbụ nkwupụta ụlọ akụ ma ọ bụ ụgwọ ikike a na-ede n'ime ọnwa atọ gara aga.
Ozugbo ndị na-ere ahịa cryptocurrency gosipụtara akaụntụ gị, ị ga-etinye ego ụfọdụ. Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ maka gị ga-adabere na onye na-ere ahịa, ọ bụ ezie na nke a na-agụnyekarị debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nyefe ụlọ akụ.
Fọdụ agbanwe agbanwe na-akwado e-wallets dị ka Paypal na Skrill. Ọ gwụla ma ị na-eji nnyefe ụlọ akụ, usoro nkwụnye ego ndị ọzọ niile bụ ozugbo.
Kwụpụ 5: Tinye ego na Cryptocurrency Nhọrọ Gị
Dị njikere ugbu a itinye ego itinye ego na cryptocurrency. Ga-ebu ụzọ họrọ otu ego ịchọrọ ịchọta (Bitcoin, Ethereum, wdg) wee banye ego ịchọrọ itinye ego.
Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji zụta Bitcoin dum, yabụ ị nwere ike ịzụta obere ihe ịchọrọ - ọ bụrụhaala na ị ga-enweta ego ntinye ego nke onye na-ere ahịa. A ga-ewepụ ego ndị ahụ na nguzozi ego gị, ị ga-ahụ mkpuchi agbakwunye na akaụntụ gị.
Mara: Usoro itinye ego na azụmaahịa CFD cryptocurrency ka na-abụkarị otu, agbanyeghị, ịgaghị eso usoro dị n'okpuru n'ịwepụ mkpụrụ ego gị. Nke a bụ n'ihi na mkpụrụ ego anaghị adị, ebe ọ bụ na ị na-atụgharị uche na ọnụ ahịa ọdịnihu ahụ.
Nzọụkwụ 6: Wepụ ego site na Broker Cryptocurrency
I gha acho iwepu ego nkpuru ego cryptocurrency zuturu nke onye ahia ahia. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nyiwe na-enye gị ohere ịchekwa mkpụrụ ego gị na weebụsaịtị nke onye na-ere ahịa, anyị ga-adụ ndụmọdụ megide nke a. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ndị ọzọ ejiri obi ọjọọ mebie onye na-ere ahịa, ị ga-anọ n’ihe ize ndụ nke izuru mkpụrụ ego gị.
Ka o siri dị, ị kwesịrị ịwepụ mkpụrụ ego gị na obere akpa ego nzuzo cryptocurrency. Iji mee nke a, gafere na obere akpa gị ma detuo adreesị akpa gị. Họrọ iji wepu ego na onye na-ere ahia site na ịgafe na adreesị akpa gị ma tinye ego ịchọrọ iji nweta. Mkpụrụ ego ahụ kwesịrị ịbata na obere akpa gị n'ime oge 1 - dabere n'ogologo oge onye na-ere ahịa na-ewe iji hazie ya.
Kedu otu esi ahọrọ onye na-ere ahia Cryptocurrency?
Tupu ịbanye na onye na-ere ahịa cryptocurrency, anyị ga-atụ aro ịjụ ajụjụ ise na-esonụ.
✔️ Ndi ahia cryptocurrency na-achịkwa?
Ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ ị masịrị?
✔️ Kedu nkwụnye ego, ndọrọ ego, na ụgwọ azụmaahịa nke onye na-ere ahịa cryptocurrency na-ana?
✔️ Onye na-ere ahịa na-enye gị ohere ịzụta Bitcoin kpam kpam, ka ị na-etinye ego na CFDs?
✔️ Ndi ahia ahia ego gi edeputara ego di nma gi di ka Bitcoin na Ethereum?
Top 5 Cryptocurrency Brokas - Kedu Broker kacha mma?
Yabụ ugbu a ị nwere nghọta siri ike banyere ihe ịchọrọ ile anya na onye na-ere ahịa na cryptocurrency, ugbu a anyị ga-edepụta nyiwe ise anyị kachasị elu nke 2021. Otu ndị otu ụlọ nọ na-enyocha ndị ọrụ a niile. ndị nyocha, yabụ nwee obi ike na nyiwe ndị a na-agbaso njirisi siri ike anyị.
1. eToro - Kacha mma Cryptocurrency Broker maka Ndị Mbido
Y’oburu n’inwe ohuru ohuru n’ime uwa nke itinye ego nke cryptocurrency, mgbe ahu anyi ga n’atu aro ilele eToro Ikpo okwu dị oke mfe iji, ị nwere ike mepee akaụntụ na nkeji nkeji. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Paymentzọ nkwụnye ego akwadoro gụnyere debit / kaadị kredit, e-wallets, na nnyefe ụlọ akụ mpaghara. Ulo oru UK nke FCA, CySEC (Cyprus) na ASIC (Australia) na-achịkwa ikpo okwu a.
You'll ga-enwe ike ịzụta cryptocurrencies 100% chara acha na eToro, agbanyeghị na ịnweghị ike ịdọrọ mkpụrụ ego gị na obere akpa. Y’oburu n’itinye itinye ego ma oburu na erere cryptocurrencies.
Enweghi ike iwepụ ego n'ime obere akpa
Na nchịkọta, e nwere ugbu a ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ na ntanetị - yana imirikiti n'ime ha na-arụ ọrụ ndị ahịa UK. Site n'ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị n'ụzọ zuru ezu, ị kwesịrị ịnwe ugbu a ngwaọrụ ndị achọrọ iji họrọ onye na-ere ahịa nke kacha mma na-egbo mkpa gị.
Nke a gụnyere usoro metrik dị ka ụkpụrụ, ọrụ, usoro ịkwụ ụgwọ, na leverage. Site na nke ahụ, anyị depụtakwara ndị isi ahịa cryptocurrency ise anyị nke 2021. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nyocha nke aka gị, ya mere, anyị ga-atụ aro iji otu n'ime nyiwe anyị akwadoro.
Kedu ihe bụ onye na-azụ ahịa ego?
Onye na-ere ahịa cryptocurrency bụ usoro nke atọ nke na-enye gị ohere ịzụta ma ree ego na-eduga dijitalụ dị ka Bitcoin na Ethereum.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe na onye na-ere ahịa cryptocurrency?
Ọnụ ego nkwụnye ego pere mpe ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, yabụ ịkwesịrị ịlele nke a tupu imepe akaụntụ. Fọdụ ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere itinye ego dị ala, ebe ndị ọzọ ga-arịọ maka £ 200 ma ọ bụ karịa.
Kedu ụgwọ ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwụ?
Nke a ga-adịgasị iche dabere na ụdị onye na-ere ahịa ị na-eji. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa CFD, ị nwere ike ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ iwepụ, ị gaghị akwụkwa ụgwọ ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụta cryptocurrencies kpamkpam, ị ga-akwụ ụgwọ ego nkwụnye ego yana ọrụ azụmaahịa.
Ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-achịkwa?
Ọ bụghị mgbe niile. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ anaghị achịkwa. Agbanyeghị, achọrọ ndị na-ere ngwaahịa CFD cryptocurrency ka ha jide ikike n'aka FCA ma ọ bụrụ na ha na-ejere ndị ahịa UK ozi.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ nke ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-akwado?
Ndị na-ere ahịa Cryptocurrency na-enyekarị gị nhọrọ nke itinye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ.
Ndị na-ere ahịa cryptocurrency na-enye gị ohere itinye ntinye ego?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ na ire abụọ abụọ cryptocurrency na leverage, ị ga-eji onye na-ere ahịa CFD ma ọ bụ usoro ikpo okwu crypto-derivative. Y’oburu n’icho nke mbu, a ghaghi itinye gi aka ime ihe 2: 1 na ndi UK.
Enwere m ike ịrepụta cryptocurrencies na onye na-ere ahịa n'ịntanetị?
Nwere ike ire cryptocurrencies dị mkpụmkpụ mgbe ị na-eji onye na-ere ahịa CFD.